पुरानो विद्यालय : अत्याधुनिक प्रविधि
असोज १, २०७२ | बाबुराम विश्वकर्मा
सीसीटीभी, इन्टरएक्टिभ बोर्ड, कम्प्युटर ल्याब र इन्टरनेटको प्रयोग मार्पmत भक्तपुर दरबार क्षेत्रको पुरानो विद्यालय, श्रीपद्म उमावि ‘हाइटेक’ सार्वजनिक स्कूल बन्न पुगेको छ । पठनपाठनमा प्रविधिको प्रयोगले यस संस्थालाई आम विद्यालयभन्दा मौलिक मात्र बनाएको छैन, शैक्षिक उपलब्धि सुधार गर्न समेत मद्दत गरेको छ ।
‘एकाइसौँ शताब्दीको कक्षामा तिमीहरूलाई स्वागत छ ।’ श्रीपद्म उमावि भक्तपुरका आईटी शिक्षक सत्यराम सुवालले कक्षा ९ का छात्रछात्रालाई आईटी कक्षामा स्वागत गरे । सुवालले थपे, “अब हामी कक्षामा सेतोपाटी प्रयोग गर्दैनौँ । सबै विषयको कक्षा अब यो इन्टरएक्टिभ बोर्डमा हुन्छ ।” उक्त बोर्ड अन गर्दै उनले भने, “खासमा यो डिजिटल सेतोपाटी हो । यसमा औँला वा डिजिटल मार्करले लेख्न, चित्र कोर्न वा आफूले तयार पारेका पाठ देखाएर सिकाइ क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ । कक्षाका सबै गतिविधि यो बोर्डमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ । यो बहुउपयोगी बोर्डले हाम्रो कक्षालाई पनि विकसित देशको हाराहारीमा पु¥याउने भएकाले मैले यसलाई एकाइसौँ शताब्दीको कक्षा भनेको हुँ ।”
प्राचार्य राम हाडाका अनुसार श्रीपद्म उमावि २० वर्षपहिले कम्प्युटर भिœयाउने आफ्नो क्षेत्रको पहिलो सरकारी विद्यालय बनेको थियो । हाडा भन्छन्— “नेपालमा कम्प्युटर दुर्लभ भएको बेला हामीले २०५२ सालमै कम्प्युटर ल्याएका थियौँ । त्यसको ठीक २० वर्षपछि इन्टरएक्टिभ बोर्ड ल्याउन सफल भएका छौँ । इन्टरएक्टिभ बोर्डले हाम्रो पठनपाठनलाई अझ् दु्रत र सजिलो बनाउने अपेक्षा गरेको छु ।”
आईटी कक्षाको भित्तामा राखिएको इन्टरएक्टिभ बोर्ड तार मार्पmत ल्याप्टप र मल्टिमिडिया सेटसँग जोडिएको छ । अब सेतोपाटी र कालोपाटीमा हुने सबै काम त्यसमै गर्न सकिनेछ । लेख्ने, लेखेका कुरा रेकर्ड गर्ने, शिक्षकले तयार गरेका पाठहरू ल्यापटप मार्फत इन्टरएक्टिभ बोर्डमा डिस्प्ले गर्ने, मेट्ने, चित्र बनाउने आदि काम यही बोर्डमा हुन्छ । यो बोर्डको प्रयोग गर्ने शिक्षकहरू कम्तीमा कम्प्युटर, इन्टरनेट र मल्टिमिडियाको प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
आईटी शिक्षक सत्यराम सुवालले करीव १० मिनेट इन्टरएक्टिभ बोर्डको प्रयोगबारे बताइसकेपछि कक्षा ९ का छात्र सुजन घिमिरेले अगाडि आएर बोर्डमा झयालको चित्र बनाए । उनले भने, “कम्प्युटरमा ड्रइङ गर्नभन्दा बोर्डमा सजिलो हुने रहेछ ।”
आईटीका शिक्षकहरूले ‘इन्टरएक्टिभ बोर्ड’ स्मार्टबोर्डको शुरूको भर्सन भएकाले यसको नाम ‘स्मार्टबोर्डको भाइ’ राखेका छन् । स्मार्टबोर्डले धेरै काम आपैm पनि गर्छ भने यसले ल्यापटप र मल्टिमिडिया सेटको सहयोगमा शिक्षण सिकाइका अधिकांश काम गर्छ । विज्ञान शिक्षकलाई कालो वा सेतोपटीमा मानव मुटुको चित्र बनाउन कम्तीमा १० मिनेट लाग्छ तर इन्टरएक्टिभ बोर्डमा १० सेकेन्डमा मुटुको चित्र डिस्प्ले गरेर त्यसको व्याख्या गर्न सक्छन् । यो बोर्डको प्रयोगले शिक्षकको समय बचत हुन्छ भने उनीहरूलाई पाठयोजना बनाएर मात्र कक्षामा आउन प्रेरित गर्छ । इन्टरएक्टिभ बोर्डको प्रयोग विधिको बारेमा श्रीपद्म उमाविले आफ्ना शिक्षकलाई सामान्य सीप सिकाइसकेको छ । आउँदा दिनमा ठूला कक्षाका अधिकांश शिक्षकले उक्त बोर्डमा कक्षा शिक्षण गर्ने विश्वास स्कूलको छ ।
धेरै विद्यालयलाई इन्टरएक्टिभ बोर्डको प्रयोग अझ्ै पनि दुर्लभ विषय हो । कतिले त यो बोर्डको नामै पनि नसुनेका हुन सक्छन् । राजधानीका सुविधा सम्पन्न एकाध स्कूल बाहेक अरू स्कूलमा अहिले पनि कालोपाटीकै प्रयोग हुन्छ भने केहीले भर्खरै सेतोपाटी प्रयोग गर्न थालेका छन् । त्यसैले इन्टरएक्टिभ बोर्डको प्रयोग आमनेपाली स्कूल शिक्षाका लागि नौलो र टाढाको कुरा पनि हो । यस दृष्टिबाट स्मार्टबोर्ड आम नेपाली विद्यालयको पहुँचमा पर्न अझ्ै निकै वर्ष लाग्न सक्छ । श्रीपद्मले शिक्षा विभागको रु. १ लाख ४० हजार अनुदानमा लगभग त्यति नै रकम थपेर रु. ३ लाखमा सो बोर्ड किनेको हो ।
पिउने पानी र बिजुलीको सुविधाबाट समेत वञ्चित सार्वजनिक स्कूलमा सीसीटीभीको प्रयोग सामान्यत: कल्पना गरिँदैन । ठूला सुपरमार्केट तथा अति संवेदनशील स्थानमा बढी प्रयोग हुने सीसीटीभीको प्रयोग अन्य शैक्षिक संस्थामा पनि विरलै हुन्छ । तर, श्रीपद्म उमाविले तीन वर्षअगिदेखि सीसीटीभीको लाभ लिएको छ । रु. २ लाखमा जडान गरेको सीसीटीभीमार्पmत प्रअ राम हाडा आफ्नै कार्यकक्षमा बसीबसी विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि नियाल्छन् । उनको कक्षमा राखिएको कम्प्युटरको मनिटरमा स्कूलको गेटबाट बाहिर–भित्र गर्ने व्यक्तिदेखि हरेक कक्षाका गतिविधि छर्लंग देखिन्छन् । त्यसले विद्यालयमा एक खालको तरंग पैदा गरेको छ । शिक्षक, छात्रछात्रा र कर्मचारी सचेत मात्र होइन, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप सजग समेत हुन थालेका छन् । सीसीटीभी जडानपछि स्कूलमा छात्रछात्रा र शिक्षकको नियमितता बढेको छ । कक्षामा हुने झ्ैझ्गडा; हल्लाखल्ला र गाली तथा सजाय समेत कम मएको छ ।
कम्प्युटर ल्याबको प्रयोगले शिक्षक र छात्रछात्रलाई नयाँ विषयमा पाठ्य सामग्री खोजी गर्न र अद्यावधिक हुन सघाएको छ ।
प्राचार्य हाडाका अनुसार स्कूलमा इ–लर्निङ को संस्कार अरू बढाउन असोजको पहिलो सातादेखि नि:शुल्क वाइफाइ जडान गरिनेछ विद्यालयको सर्वरबाट कसैले पनि हानिकारक अश्लील साइट खोल्न नसकून् भनी विशेष एप्स पनि डिजाइन गरिएको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा प्राचाय हाडा भन्छन्— “शिक्षक र छात्रछात्राले सिकाइको काममा इन्टरनेटको अत्यधिक सुविधा प्रयोग गरुन् तर दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।”
विकसित देश इ–लर्निङ बाट अझ् अगि बढेर स्मार्ट कक्षाको अभ्यासमा पुगेका छन् । पेपरलेस अफिस जस्तै ‘पेपरलेस शिक्षण संस्था’ को अवधारणा पनि आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा श्रीपद्मले शिक्षण सिकाइमा गरेको प्रविधिको प्रयोग अरूहरूका लागि पनि मार्गदर्शन हुन सक्छ । किनभने ढिलो–चाँडो पठनपाठनमा सूचना÷प्रविधिको प्रयोग नगरी सुख छैन । शिक्षा मन्त्रालयले २०६९ मै आईसीटी इन एजुकेशनका नाममा रु. एक अर्ब बजेट विनियोजन गरी देशका ७ हजार माविलाई रु. १ लाख ४० हजारका दरले कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न अनुदान दिने कार्यक्रम अगिसारेको हो । त्यो बजेटले कतिपय स्कूलमा कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गरिए पनि केहीमा बिजुली र प्रयोग सीपको अभावमा किनिएका कम्प्युटर त्यसै थन्किएका छन् भने कतिपयले आईसीटीको बजेट अरू नै काममा प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिएको छ ।
‘टिचर डिस्कसन अन एजुकेशनल इसुज’ नामक फेसबुक ग्रुप बनाएका शिक्षक नेता लक्ष्मण शर्मा भन्छन्— “एकाइसौँ शताब्दीको शिक्षाको मुख्य साधन नै सूचना र प्रविधि हो । तर डिजिटल लिटरेसीका आधारमा अरू मुलुक पाँचौँ पुस्तामा छन् भने हामी पहिलो पुस्तामा छौँ ।”